118% Gibraltar oo la tallaalay ayaa baajiyay Christmas-ka kororka cusub ee COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » 118% Gibraltar oo la tallaalay ayaa baajiyay Christmas-ka kororka cusub ee COVID-19
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Entertainment • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
118% Gibraltar oo la tallaalay ayaa baajiyay Christmas-ka kororka cusub ee COVID-19.
In ka badan 118% dadka Gibraltar ayaa si buuxda looga tallaalay Covid-19, iyadoo tiradan ay dhaaftay 100% sababtoo ah qiyaaso la siiyay Isbaanishka oo ka soo gudba xadka si ay uga shaqeeyaan ama u booqdaan dhulka maalin kasta.
Dhammaan dadka waaweyn ee Gibraltar ayaa si buuxda loo tallaalay ilaa Maarso, 2021.
Maaskaro ayaa weli looga baahan yahay dukaamada iyo gaadiidka dadweynaha ee Gibraltar.
Sidoo kale wadamada sida wanaagsan loo tallaalay ayaa sidoo kale soo sheegay sare u kac ku yimid caabuqyada Covid-19 dhawaanahan.
Saraakiisha dowladda Gibraltar ayaa ku dhawaaqay in dhammaan xafladaha Kirismaska ​​​​ee rasmiga ah, soo dhaweynta rasmiga ah iyo isu imaatinka la midka ah la joojiyay.
Guud ahaan dadweynaha ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay inay ka fogaadaan xafladaha iyo xafladaha bulshada afarta toddobaad ee soo socda. Dhammaan dhaqdhaqaaqyada kooxda, bannaannada bannaanka ayaa lagula talinayaa kuwa gudaha ah, taabashada iyo laabta waa la niyad-jabiyaa, waxaana lagula talinayaa xirashada maaskaro.
Dhammaan dadka Gibraltar ee xaqa u leh waa la tallaalay, laakiin iyada oo ay sii kordhayaan kiisaska COVID-19, Gibraltar Saraakiisha ayaan wax fursad ah ka helin munaasabadaha Christmas-ka.
“Kororka ba'an ee tirada dadka laga helay cudurka COVID-19 maalmihii la soo dhaafay waxay xusuusin weyn u tahay in fayrasku wali aad ugu badan yahay bulshadeena iyo inay mas'uuliyad naga saaran tahay dhammaanteen inaan qaadno taxaddar kasta oo macquul ah si aan nafteena u ilaalinno. kuwa aan jecelnahay,” ayay tiri Wasiirka Caafimaadka Samantha Sacramento.
Gibraltar, Dhul yar oo British Dibadeed ah oo xuduud dhul la wadaaga Spain, wuxuu arkay celcelis ahaan 56 COVID-19 kiis maalintii todobadii maalmood ee la soo dhaafay, in ka yar 10 maalintii Sebtembar. Kor u kaca kiisaska, oo ay dawladdu ku tilmaantay 'mid la yaab leh,' ayaa imanaya in kasta oo Gibraltar uu haysto heerka tallaalka ugu sarreeya adduunka.
In ka badan 118% dadka Gibraltar ayaa si buuxda looga tallaalay COVID-19, iyadoo tiradan ay dhaaftay 100% sababtoo ah qiyaaso la siiyay Isbaanishka oo ka soo gudba xadka si ay uga shaqeeyaan ama u booqdaan dhulka maalin kasta. Dhammaan dadka waaweyn ee Gibraltar ayaa si buuxda loo tallaalay ilaa bishii Maarso, waxaana weli looga baahan yahay dukaamada iyo gaadiidka dadweynaha waji-xidhka.
Gibraltar waxay hadda siinaysaa qiyaaso xoojin ah 40-meeyada, shaqaalaha daryeelka caafimaadka, iyo 'kooxaha kale ee nugul', waxayna siisaa tallaalada carruurta da'doodu u dhaxayso shan iyo 12.
Sidoo kale wadamada sida wanaagsan loo tallaalay ayaa sidoo kale soo sheegay sare u kac ah infekshannada COVID-19 dhawaanahan.
Dalka Singapore, oo 94% dadka xaqa u leh lagu tallaalay, kiisaska iyo dhimashadu waxay kor u kaceen ilaa heerkii ugu sarreeyay dhammaadkii Oktoobar, tan iyo markaas wax yar ayay hoos u dhaceen.
Ireland gudaheeda, oo ku dhawaad ​​92% dadka qaangaarka ah si buuxda loo tallaalay, kiisaska COVID-19 iyo dhimashada fayraska ayaa ku dhawaad ​​labanlaabmay tan iyo Ogosto.
Deb Dimishiq wuxuu leeyahay,
Diisambar 7, 2021 at 11:22
Sidee waddan ka badan 100% fayraska uu dad badan oo ka mid ah dadkiisa ula soo degeen fayraska? Ma laga yaabaa in tallaalku aanu fiicnayn? Ma noqon kartaa in oggolaanshaha caabuqa, ku daweynta hab-maamuusyada daawaynta ee la xaqiijiyay ay tahay dariiq wanaagsan oo loo maro difaac adag oo nolosha ah? Miyay noqon kartaa in vaxing inta lagu jiro aafo faafa ay ku qasabtay fayrasku inuu noqdo mid aad u daran? Adduunka ka kac.
Hello wuxuu leeyahay,
Nofeembar 23, 2021 at 20: 22
Ma jiro qof burinaya kirismaska ​​gibraltar. Waa war been abuur ah. Wasiirku waxa uu si run ah u sheegay war cusub, sababtoo ah waxa uu arkay waxa ay dadka doqomada ahi ka yidhaahdeen
BOOSTER-ul FUNCȚIONEAZĂ DE MINUNE DAR NUMAI DUPĂ CE FACI VREO 7: Gibraltarul vaccinat în proporție de 118% anulează Crăciunul din cauza unui nou focar de COVID-19 - Mucenicul's Blog wuxuu leeyahay,
Nofeembar 17, 2021 at 14: 27